असल र सोझा केटाहरुले मात्र किन प्रेममा धोका पाँउछन ? यस्तो छ कार’ण « गोर्खाली खबर डटकम
“हामी तपाइँहरुलाई सधै प्रेरणादायी कुराहरु दिने गरेका छौ । प्रेरक भनाईहरु, मनछुने लाईनहरु र साथ् साथै सुन्दर जीवनको लागि स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारीहरु पनि पस्किने गरेका छौ । आशा छ हाम्रो यी जानकारीहरुले तपाइँहरुलाई केहि न केहि सहयोग अवश्य पनि पुर्याइरहेको छ । आज पनि हामीले यहाँ तपाइँहरु माझ एउटा जानकारीमुलक कुरा लिएर आइसकेका छौ । भनिन्छ सोझै रुख सदैव पहिला नै काटिन्छ । प्रेममा पनि यही नियम लागु हुन्छ किनकी असल र सोझा केटाले मात्र बढी प्रेममा धोका खाने गर्छन । प्रायः खराब केटाले असल जीवन साथी पाउँछन् र यस्ता केटाका साथ धोका हुन्छ जसले भित्री हृदयदेखि नै प्रेम गर्छन । त्यसो भए असल र सोझो हुनु के पाप हो त ?
अवश्य पनि हुन सक्दैन । भनिन्छ प्रेममा धोका हुँदैन । धोकामा पो धोका हुन्छ। प्रेममा त प्रेम नै हुन्छ। धोका भयो भने त्यो प्रेम होइन, जाल मात्र हो । प्रेममा मिसावट हुँदैन, मिसावट भएको प्रेम हुँदैन। प्रेम शुद्ध हुन्छ। आजकाल प्रेम गरिन्छ र गराइन्छ । समयक्रमसँगै विचार र क्रियाकलापहरू बदलिँदै जान्छन् । समयसँगै पहिलेको जस्तो धारणा र सम्पर्कमा कमी आउँदै जान्छ । कसैको प्रेममा फस्नु लागू पदार्थको नसामा धुत हुनु जस्तो हुन्छ । असल र सोझा केटाले मात्र प्रेममा धोका पाँउने कारणहरु यस प्रकार छन्।
नोट : तपाईहरुलाई हाम्रो जानकारी कस्तो लाग्यो ? यदि हाम्रो यो जानकारीले अरुको जीवनमा पनि परिवर्तन ल्याओस भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो लेखलाई शेयर गर्दिनुहोला । तपाइको एक शेयरले थाहा नभएका हरुले ज्ञान पाउनेछन् भने हामीलाई पनि सहयोग मिल्नेछ ।